होमपेज / खेल / विचार / अग्निपरीक्षाको घडी
अग्निपरीक्षाको घडी	02 Dec 2015 बुधबार १६ मंसिर, २०७२
वीरेन्द्रप्रसाद यादव	Be the first to comment! 12345 (0 votes)
सय दिन नाघेको तराई–मधेस आन्दोलन टुंगिने संकेत देखिन्न । सरकारले झुक्दैनौँ भन्दैछ भने आन्दोलनकारी माग पूरा नभएसम्म मैदान नछोड्ने अडानमा छन् । दुवै अतिवादको चरम मार मुलुक र जनता खेप्दैछन् । भूकम्पले थिलथिलो पारेको पीडितको मात्र होइन तराईदेखि हिमालसम्मको चुलो निभेको छ । औषधि अभावमा बिरामी मर्दैछन्। मानवीय संकट चुलिँदौ छ । तर, निकासको छाँट देखिँदैन । संयुक्त मधेसी मोर्चाले सुरु गरेको आन्दोलनमा यतिखेर मधेसवादी दल, सशस्त्र शक्ति, पृथकतावादी मानसिकताका व्यक्ति तथा बौद्धिक वर्ग सक्रिय छन् । यसको व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण छ ।आमजनताको आवश्यकता पूरा गर्न, कालोबजारी रोक्न, प्रकोपको पीडा कम गर्नु पूर्ण असफल रहेको सरकार छिमेकीसँग जुहारी गर्दै ठूलो संकट निम्त्याइरहेको छ । जति बल गरे पनि चीनलगायत अन्य देशबाट आवश्यकताको १५ प्रतिशतभन्दा बढी आपूर्ति हुने अवस्था छैन । नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्यो भने भारतमा पनि नेपालविरोधी भावना बलियो हुनसक्छ भनी हाम्रा नेताले बुझ्नु जरुरी छ । यतिखेर सामाजिक सञ्जालले एकअर्काप्रति घोचपेचको क्रम बढाएको छ । वैज्ञानिक आधारबिना गरिएको सीमांकनमा राज्य लचिलो बन्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले बुझ्नु जरुरी छ । यही सीमांकनका सवालमा राज्यले पहाड र मधेसलाई दुईथरि व्यवहार ग¥यो । पहाडका कुरा एक सातामा सुन्यो भने मधेसलाई साढे ३ महिना हुँदा पनि सुन्न चाहेन ।देशले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन–हुँदैन । सबैलाई बराबर दूरीमा राख्नुपर्छ । अहिले मधेसको अवस्था नितान्त फरक छ । हिजोको निर्वाचनमा आएको परिणाम सदाका लागि मान्य हुँदैन । यतिखेर मधेसमा ३ ठूला दलका लागि जे पनि गर्न तयार हुने कार्यकता हिनताबोधमा बाँचिरहेका भेटिन्छन् । आफू संलग्न दलले धोका दिएको तिनको मूल्यांकन छ । यसबाट मधेसमा ठूला दलको जनमत कमजोर बन्न पुगेको छ । यसकारण पनि जतिसक्यो चाँडो ठूला दलले मधेसको आवाज सुन्नु आवश्यक छ । समाधान जति ढिलो भयो उति नै ठूला दललाई घाटा पर्नेछ ।जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र सामानुपातिक सामावेशी संशोधन विधेयक पारित नगरी सरकार एवं ठूला दल सार्वभौम संविधान सभाको निर्णयको अवज्ञा गर्नुका साथै आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन बाध्य पार्दैछन् । यति दुई कुरामात्रै संशोधन हुन सक्दा पनि आन्दोलनकर्ताले आफूलाई सुनेको महसुस गर्नेछन् । अमेरिकाजस्ता देशले त संविधान ल्याएको पहिलो ६ वर्षमा ११ पटक र अहिलेसम्म २२६ वर्षको अवधिमा २७ पटक संशोधन गरिसकेको छ । अमेरिकी संविधान निर्माताले पनि आफ्नो संविधान उत्कृष्ट नै भनेका थिए, तर त्यहाँ संविधानतः अश्वेत, महिला, दास, धार्मिक अल्पसंख्यकलगायतलाई मतदान गर्नेसम्मको अधिकार थिएन । महिलाको जनसंख्या आधा हुँदा पनि मतदान गर्ने अधिकारी पाउन १३० वर्ष संघर्ष गर्नुप¥यो । अमेरिकामा २० प्रतिशतभन्दा कम श्वेत जमातले बनाएको संविधानलाई उत्कृष्ट भनेजस्तै ५१ प्रतिशत जनसंख्या असन्तुष्ट रहेको नेपालको संविधान कफ्र्युमाझ जारी गरेर कति उत्कृष्ट हुन सक्ला ? यसर्थ संविधानमा कमजोरी नै छैन, संशोधन गरिँदैन भन्नु अतिवादमात्रै हो । त्यसैगरी, तराईमा आन्दोलनरत दलले पनि सबै कुरा अहिले नै नपाइ छोड्दैनौँ भन्नु पनि व्यावहारिक हँुदैन । संविधान गतिशील प्रक्रिया हो । संशोधन गर्न सकिने संविधानको सरल विधि सबैको जायज माग पूरा गर्ने हतियार हो ।मुलुकमा निम्तिएको संकटलाई रोक्न प्रधान मन्त्री तथा अन्य ठूला दलको जिम्मेवारी जति छ त्यति नै मधेसवादीको पनि छ । मधेस आन्दोलन राजनीतिक दलको नियन्त्रणबाहिर जाने सम्भावना बढ्दो छ । त्यसो हुँदा जेजस्ता दुर्घटना हुन्छन्, त्यसको जिम्मा आन्दोलनकारी शक्तिले लिनुपर्छ । अहिले राष्ट्रियताको ढोल पिट्ने होइन, बरु यसको वास्तविकरूपमा संरक्षणको खाँचो छ । सरकार र आन्दोलनकारी जो बढी उदार भएर संकटबाट निकास निकाल्न अघि सर्छन् उही नै असल राष्ट्रवादी सावित हुनेछन् । यो दुवै पक्षको अग्निपरीक्षाको घडी हो । Tweet प्रतिक्रिया